Tontolo iainana : voasarik’i Madagasikara i Julien Lepers | NewsMada
Tontolo iainana : voasarik’i Madagasikara i Julien Lepers
Amin’ny maha ray mpiahy ny « Festival des baleines » azy, tonga eto Madagasikara i Julien Lepers. Mahita zavatra maro, miaina zavatra maro izy amin’izao diany izao. Anisan’ny goavana amin’izany ny tontolo iainana izay nanehoany ny heviny tao amin’ny radio Alliance 92 FM, omaly.
Antony iray naneken’i Julien Lepers hiahy mivantana ny hetsika « Festival des baleines » tontosaina any amin’ny Nosy Sainte Marie amin’izao fotoana izao, ny fahitany ny tontolo iainana eto Madagasikara. Voasarika sy liana amin’ny zava-misy ao anatin’izany ity mpanolotra teo aloha ny fandaharana « Question pour un champion » ity. « Tontolo iainana malalaka, midadasika, mahafinaritra… Mila jerena akaiky satria manan-karena ny eto Madagasikara », hoy izy. Tsy vao izao rahateo i Julien Lepers no nandalo teto Madagasikara.
Nohamafisiny fa tokony hifaly sy hanana hambo amin’ny fananana ireny tontolo iainana tsara ireny ny Malagasy sy izao tontolo izao mihitsy. « Tsy manana planeta hafa harovana afa-tsy ity isika, noho izany mila manao izay fiarovana azy ireny izay », hoy i Julien Lepers. Ny fahatsapana tahaka io no anisany nahatonga azy hiraiki-po amin’ny tontolo iainana sy ny zavaboary, raha ny fanazavana nomeny. Tsy tokony ho anjaran’olona vitsy anefa ny miaro sy manasongadina io hatsaran’ny tontolo iainana io fa ny olona tsirairay mihitsy. Samy mandray anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ny olona 7 lavitrisa, hiteraka vokatra tsara sy goavana ny fahavitana izany.
Nasongadiny manokana sady noraisiny ho ohatra nandritra ny tafa nataony tao amin’ny radio Alliance 92 FM ny hakanton’ny tontolo iainana sy ny zavaboahary mandritra ny fandalovan’ny trozona any amin’ny manodidina ny Nosy Boraha. « Any amin’ny 300 ka hatramin’ny 500 m, mahita trozona mitsambikina avo… Mahalana vao mahatazana izany. Harena be ho anareo, sy ho an’izao tontolo izao ny fananana izany », hoy izy.
Fantatra fa hihazo ny Nosy Sainte Marie anio i Julien Lepers ka handray anjara amin’ny fitsarana ireo fifaninanana sasany tafiditra ao anatin’ny « Festival des baleines ». Ankoatra ny maha mpanentana fandaharana azy, mpamoron-kira sy mpanoratra i Julien Lepers. Mahay mitendry piano ihany koa izy. « Efa namadika pejy aho ka eo am-panomanana fandaharana vaovao amin’ny televiziona, any amin’ny volana oktobra », hoy i Ronan Gerval Lepers raha namintina fohy ny diany atsy ho atsy.